तपाईको बालबालिकामा औंला चुस्ने बानी छ ? यस्तो छ असर - Samatal Online
तपाईको बालबालिकामा औंला चुस्ने बानी छ ? यस्तो छ असर
तपाईको बालबालिकामा औंला चुस्ने बानी छ ? यदी यस्तो बानी छ भने तुरुन्त परीवर्तन गर्न सिकाउनुस् । किनकी बाल्यअवस्थामा औंला चुस्ने बानीले बालबालिकाको दाँतको विकास राम्रोसँग हुँन दिदैन ।
औंला चुस्ने बानीले गर्दा बालबालिकाको अगाडीको दाँतमा खाली ठाउँ अर्थात दातहरु मिलेको हुँदैन । बाल्यअवस्थामा औंला चुस्ने बानीले गर्दा वयश्क भएपछि दाँतहरुको बीचमा खालीभाग प्रष्ट देखिन्छ ।
दाँतको विकास हुने समयमा बालबालिकाहरु औंला चुसेर बस्दा गिजामा दवाव गर्छ । जसले गर्दा दाँतको विकास स्वतन्त्र रुपमा हुन पाउँदैन । त्यसले गर्दा दाँतको बीचमा खाली भाग रहन्छ ।
बाल्यअवस्थामा यो विषयमा ख्याल नभएपनि वयश्क हुँदा प्रष्ट देखिने हुँनाले कतिले दन्त चिकित्सकको पुगेर दाँतलाई पछि मिलाउने समेत गर्छन् । तपाई कतिले यस्तो समस्या भोग्नुभएको होला । त्यसैले तपाईलाई परेको समस्या तपाईका बालबालिकालाई भोग्न नदिन सानैमा औंला चुस्ने बानी परिवर्तन गर्न लगाउनुपर्छ ।
औंला चुस्ने बानीले दाँतलाई मात्र होइन बालबालिकाको स्वास्थ्य लाई पनि असर पर्छ । औंलामा भएको रोगका किटाणुहरु सहजै शरीरिभित्र प्रवेश गरी विभिन्नरोगहरु पनि लाग्न सक्ने भएकाले बालबालिकालाई औंला चुस्न दिनु हुँदैन ।
बालबालिकामा औंला चुस्ने बानी छ भने परिवर्तन गराउन किनै गाह्रो हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अभिभावकले शुरु मा सम्झाउने र सम्झाउदा पनि अटेर गरेमा उनीहरुलाई नम नपर्ने खानेकुरा औंलामा लगाइदिदा उनीहरुमा औंला चुस्ने बानी विस्तारै हट्छ । विशेषगरी आमाको दुध प्रयाप्त मात्रामा पीउन नपाएका बालबालिकामा औंला चुस्ने बानी बस्ने भएकाले आफ्नो बच्चालाई पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ ।